သင်၏ Corporate Blogging Strategies ကိုမြှင့်တင်ရန်အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်များ Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, မတ်လ 13, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
စကားပြောများအတွက်ပြင်ဆင်မှုအတွက် SharpMinds များ Corporate Blogging အကြောင်းအုပ်စုလိုက်၊ ငါများစွာသောဆိုဒ်များမှအရင်းအမြစ်အတော်များများကိုစုစည်းထားသည်။ သူတို့ကိုလူသိရှင်ကြားမပြောဘဲနေရင်ငါခွင့်လွှတ်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်သည်ရှေးရှေးများကိုအရင်းအမြစ်များနှင့်ဤရှေးရှေး၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့ပြန်လည်ချိတ်ဆက်မှုများအားလက်ကမ်းစာစောင်ပေးနေသည်။
အမှန်အတိုင်းပြောရရင်အရင်ကငါဟာကော်ပိုရေးရှင်းဘလော့ဂ်ကိုမဟာဗျူဟာတစ်ခုအနေနဲ့ဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ငါဟူသောဝေါဟာရကိုရေးသားခဲ့သည် ခုံဖိနပ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းကဘလော့ဂ်မှာမဟာဗျူဟာကျဖို့ဒါမှမဟုတ်တိုင်းတာဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါဒါကများသောအားဖြင့်ပါပဲ။ ဒါဟာသင့်အပေါ်ဆိုးကျိုးဖြစ်စေတယ်။ ကောင်းမွန်သောကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာဘလော့ဂ်လုပ်ခြင်း၏ဥပမာများစွာကိုကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ အကယ်၍ သူတို့ကဒီနည်းပညာကိုသူတို့ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်မှာထည့်သွင်းမထားရင်ကုမ္ပဏီတွေအမှားလုပ်မိမှာပဲ။
အဘယ်ကြောင့် Corporate Blogging ရှိနေခြင်း?
မကြာသေးမီက blogging သည်သူတို့၏ကုမ္ပဏီများနှင့်ဖောက်သည်များအားမည်သည့်အရာနှင့် ပတ်သက်၍ ထောက်ပံ့ပေးသည်ကိုတန်ဖိုးထားသောကုမ္ပဏီများစွာကိုသတိပြုမိလာသည်။
ကုမ္ပဏီနှင့်သူတို့၏ ၀ န်ထမ်းများအားသူတို့၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်အတွေးအခေါ်ခေါင်းဆောင်များအဖြစ်ထိတွေ့စေသည်။
ကုမ္ပဏီ၏မြင်သာမှုကိုတိုးတက်စေသည်။ အမှန်တကယ်တွင်အချို့သောစာရင်းအင်းများအရကုမ္ပဏီ၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်များသို့လည်ပတ်မှု၏ ၈၇% သည်၎င်းကိုဘလော့ဂ်များမှတစ်ဆင့်ပြုလုပ်သည်။
သင်၏ ၀ န်ထမ်းများ၊ ဖောက်သည်များနှင့်အလားအလာများကိုသင်၏ကုမ္ပဏီအားလူအများရှေ့ဖော်ပြခြင်း။
သင်၏ကုမ္ပဏီတိုးတက်စေရန် blogosphere နှင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည် ရှာတွေ့နိုင်သည် အင်တာနက်ပေါ်မှာ။
ဘလော့ဂ်များကိုကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊ ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုပါ ၀ င်စေခြင်းနှင့်ကုမ္ပဏီအတွက်ဘလော့ဂ်များကိုအတည်ပြုပေးသောဘလော့ဂ်ကော်မတီကိုစုစည်းရန်စဉ်းစားပါ။
ဘလော့ဂါများကိုဖတ်ရန်နှင့်သူတို့၏အကြံဥာဏ်များကိုဘလော့ဂ်များမှရယူရန်သင်၏ဘလော့ဂါများကိုအားပေးပါ။ Marketing နှင့် Press Release အရင်းအမြစ်များကိုလူမိုက်အဖြစ်ရှုမြင်ပြီးဘလော့ဂါများကပုံမှန်အားဖြင့်လှည့်ဖျားခြင်း၊
သင့်ဘလော့ဂ်၊ ရည်ရွယ်ချက်နှင့်နောက်ဆုံးအမြော်အမြင်အတွက်အာရုံစိုက်ထားသောခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပါ။ ဤအရာများကိုသင်၏ဘလော့ဂ်ပေါ်တွင်ထိရောက်စွာဆက်သွယ်ပြီးသင်၏အောင်မြင်မှုကိုမည်သို့တိုင်းတာမည်ကိုတွက်ဆပါ။
မင်းရဲ့ပို့စ်တွေကို Humanize လုပ်ပြီးဇာတ်လမ်းပြောပြပါ။ ဇာတ်ကြောင်းပြောခြင်းသည်လူများအားသင်၏ပို့စ်၏သတင်းစကားကိုပညာပေးရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဂရိတ်ဇာတ်လမ်းပြောသူများအမြဲအောင်ပွဲခံသည်။
ပါ ၀ င်ပြီးသင့်စာဖတ်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပါ။ သူတို့ကိုသင်၏ခေါင်းစဉ်များအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်တုံ့ပြန်ချက်များကိုခွင့်ပြုပြီးသူတို့ကိုလေးစားစွာဆက်ဆံပါ။ အခြားဘလော့ဂ်များတွင်ပါ ဝင်၍ သူတို့နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။ ၎င်းသည်သင်ဆက်သွယ်ရမည့် 'လွှမ်းမိုးမှုနယ်ပယ်' ဖြစ်သည်။
ယုံကြည်မှု၊ အခွင့်အာဏာနှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ကိုတည်ဆောက်ပါ။ လျင်မြန်စွာနှင့်ထိရောက်စွာတုံ့ပြန်ပါ။ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်သည့်အခါသင်၏ကုမ္ပဏီသည်လည်းတိုးတက်လာလိမ့်မည်။
အရှိန်အဟုန်ကိုတည်ဆောက်ပါ။ ဘလော့ဂ်များဟာဒီစာမူအကြောင်းမဟုတ်ပါ၊ တင်ပို့ချက်များ၏စီးရီးများအကြောင်းပါ။ အင်အားအကောင်းဆုံးဘလော့ဂ်များသည်အရေးကြီးသည့်အကြောင်းအရာများကိုပုံမှန်တွန်းအားပေးခြင်းဖြင့်ဂုဏ်သတင်းနှင့်ဂုဏ်သိက္ခာကိုတည်ဆောက်သည်။
ဒီမှာ ၀ င်ရိုး ၃ ခုပါသောကျွန်ုပ်၏ရူပါရုံမှာဘလော့ဂ်ဂါမဟာဗျူဟာပါ ၀ င်သည် တြိဂံ Blogging:
trackback တစ်ခုကဒီဇိုင်းတစ်ခုလုံး၏မဟာဗျူဟာတွင်ပျောက်နေသည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အကြောင်းပြောတဲ့အခါ Corporate Blogging မဟာဗျူဟာများဒီဇိုင်းကအရမ်းအရေးကြီးတယ်၊ ဒါပေမယ့်စျေးကွက်ကကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတယ်။ ဘလော့ဂ်မ ၀ င်ခင်ကော်ပိုရေးရှင်းတွင် ၀ က်ဘ်ဒီဇိုင်းနှင့်တည်ရှိမှုရှိပြီးဖြစ်သည်။ မရရှိလျှင်, သူတို့သည်အကောင်းဆုံးစာရင်းထည့်သွင်း!
မကြာသေးမီကမှမဟုတ်သောစာအုပ်ကလပ်အစည်းအဝေးတစ်ခုတွင် ၀ န်ထမ်းဘလော့ဂ်ရေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်ဥပဒေကတရားဝင်သည်ကိုတက်ရောက်သူတစ် ဦး ဖြစ်သောရှေ့နေကိုမေးမြန်းခဲ့သည်။ သူက၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့်အခြားမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုပြောသော ၀ န်ထမ်းနှင့်အတူတူပင်စွန့်စားမှုဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ စင်စစ်အားဖြင့် ၀ န်ထမ်းလက်စွဲစာအုပ်အများစုသည်ထို ၀ န်ထမ်းများ၏လုပ်ရပ်များ၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ သင်၏ ၀ န်ထမ်းများ၏မျှော်လင့်ထားသည့်အပြုအမူများကိုဖုံးကွယ်ထားသည့် ၀ န်ထမ်းလက်စွဲစာအုပ်မရှိပါကသင်လုပ်သင့်သည်။ (မည်သို့ပင် blogging ၏) ။
ဤတွင်အပေါ်စိတ်ကူးကိုးကားပါတယ် DO's နှင့်တရား ၀ င်ရှုထောင့်မှဘလော့ဂ်မပြုလုပ်ပါ.
ဝေဖန်မှု၊ အပျက်သဘောထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုနှင့်မှတ်ချက်များကိုသင်မည်သို့ကိုင်တွယ်မည်နည်း။ သင်၏ဘလော့ဂ်တွင်မှတ်ချက်များကိုမည်သို့မည်ပုံပြန်လည်ပြင်ဆင်မည်နှင့်မည်သို့မည်ပုံလက်ခံမည်ကိုမျှော်လင့်ထားခြင်းကိုရှေ့တန်းတင်ရန်အကြံပြုလိုသည်။ ငါမည်သည့်ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်များအတွက်မှတ်ချက်ပေးရန်မူဝါဒအားပေးလိမ့်မယ်။
သင်အမှတ်တံဆိပ်ထိန်းချုပ်မှုကိုဘယ်လိုသေချာစေမလဲ သင်၏ဘလော့ဂ်ဂါများသည်ကြွေးကြော်သံများ၊ အမှတ်တံဆိပ်များသို့မဟုတ်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်၏အသံများဖြင့်ရှုပ်ထွေးနေစရာမလိုပါ။ လက်ကိုချွတ်ပါ
အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုမရှိသောသင်၏ဘလော့ဂါများနှင့်သင်မည်သို့ဆက်ဆံမည်နည်း။ သင်၏ဘလော့ဂ်ဂါများတွင်ပါ ၀ င်မှုသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည့်မူဝါဒကိုလက်သင့်ခံအောင်လုပ်ပါ။ သူတို့ကို Boot တက်ပေးပါ။ ခေါင်းစဉ်တစ်ခု၏တသမတ်တည်းသောရလဒ်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းသည်မည်သည့်ဘလော့ဂ်ရေးမဟာဗျူဟာတွင်မဆိုအရေးပါသည်။
Dummies အတွက်ကော်ပိုရိတ် Blogging - ငါကရေးသားခဲ့သည်!
အဆိုပါ Corporate ဘလော့ဂ်စာအုပ်ဖြေ - မှန်မှန်ကန်ကန်ရဖို့သင်သိထားသင့်တဲ့အရာအားလုံး။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ဘော်ရီဂျင်နီ: ယခုစီးပွါးရေးလုပ်ငန်း၏ ဦး တည်ချက် - ဗီဇ၊ Nomadic နှင့်အမြဲတမ်းပြောင်းလဲခြင်း။
Corporate Blogging အကြံဥာဏ်နှင့်အရင်းအမြစ်များ
ဒီ post မှာကျွန်တော်စုစည်းထားခဲ့တဲ့အချက်အလက်တွေအားလုံးဟာအပေါ်ကအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ဒီ link တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့မှုတ်သွင်းခံတွေပဲ။ ဒီနေရာမှာအသေးစိတ်ကိုးကားရန်ပို့စ်များကိုများလွန်းရှိခဲ့သည်။ ငါတတ်နိုင်သမျှသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်မဟာဗျူဟာအပေါ်အများအပြားကျွမ်းကျင်သူများရဲ့ရှုထောငျ့မြားစှာခြုံငုံသုံးသပ်ပေးလိမ့်မည်ဟုပို့စ်တစ်ခုတည်းအတွက်အတူတကွထားရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ဒီဘလော့ဂ်ပိုင်ရှင်တွေကအဲဒါကိုသဘောကျတယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။
အရှေ့မြောက်တက္ကသိုလ်မှ Blogging အောင်မြင်မှုကိုလေ့လာခြင်း
အဆိုပါ Squarespace Insider
ဒီ post ကိုအချို့ပေးမပါဘဲပြည့်စုံလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ် လင့်များ။ အချို့မှာ အရာရှိ ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်များပေမယ့်ငါကြည့်ဖို့အရေးကြီးတယ်ထင်ပါတယ် တရားမဝင် အဖြစ်ကောင်းစွာကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်များ။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဘလော့ဂ်မချရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်အခြားသူတစ် ဦး ဦး ကအကြောင်းအရင်းကိုဖော်ပြနိုင်သည်။
Matt Cutts: Gadgets၊ Google နှင့် SEO
တရားမဝင် DreamHost ဘလော့ဂ်
Corporate Blogging ရှာဖွေခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံး
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်စားသုံးသူများသည်အကြောင်းအရာများကိုစားသုံးခြင်းဖြင့်၎င်းတို့၏နောက်ထပ်အွန်လိုင်းဝယ်ယူမှုကိုသုတေသနပြုနေပြီးကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်များကထိုအကြောင်းအရာများကိုပေးသည်။ သင်၏ပလက်ဖောင်း (ပုံမှန်အားဖြင့် WordPress) နှင့်သင့်အကြောင်းအရာများကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်သင်လုပ်ဆောင်ရမည့်အဆင့်များရှိသည်။ သင်ကအနီရောင်ကော်ဇောကိုဂူဂဲလ်သို့အရောက်ပို့သောအခါသူတို့သည်သင်၏အကြောင်းအရာများကိုအညွှန်းနှင့်သင့်ပါဝင်မှုကိုသိသိသာသာတိုးချဲ့သည်။ Bryant Tutterow သည်သင်၏ဘလော့ဂ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ရန်စီးရီးတစ်ခုကိုရေးသားခဲ့သည် - ၎င်းကိုဖတ်ရှုပြီးသေချာစွာဖတ်ပါ Highbridge သင်အကူအညီလိုလျှင်။
သင်၏ကိုယ်ပိုင်အကြိုက်ဆုံး Corporate Blogging Links များကိုမှတ်ချက်ပေးရန်နှင့်ဖြည့်ရန်အခမဲ့ပါ။
Tags: ဘလော့ဂ်Blogging လမ်းညွှန်များအရင်းအမြစ်များကို bloggingကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်ဥပမာDummites များအတွက်ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်ကော်ပိုရေးရှင်း blogging လမ်းညွှန်များကော်ပိုရေးရှင်း blogging မဟာဗျူဟာများ
မတ်လ 13, 2007 မှာ 9: 46 pm တွင်
ဘလော့ဂ်ရေးအောင်မြင်မှုကို ကိုးကားခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ လေ့လာမှု၏ ဦးဆောင်စာရေးဆရာ နှစ်ဦးအနက်မှ တစ်ဦးအနေဖြင့် ဘလော့ဂ်ရေးခြင်းဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်အချို့ဖြင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကို ကူညီရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။
မတ်လ 13, 2007 မှာ 10: 15 pm တွင်
အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ လေ့လာမှုတစ်ခုပါ။ ငါ အဲဒါကို ဖြတ်ပြီးပြီ ဒါပေမယ့် ဒီထက် ပိုနက်ရှိုင်းအောင် တူးဖို့ မစောင့်နိုင်တော့ဘူး။ ဤအရာကို ပေးဆောင်ခြင်းဖြင့် သင်သည် ကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုကို ပြီးမြောက်ခဲ့ပြီ။ ကောင်းစွာပြီးဆုံးသည်!
မတ်လ 14, 2007 မှာ 1: 57 AM
ကုမ္ပဏီအတွက် ဘလော့ဂ်များကို အတည်ပြုပေးသော ဘလော့ကော်မီတီကို စုစည်းပြီး စဉ်းစားပါ။
ဒီတော့ အခြေခံအားဖြင့် ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်ဟာ နေ့စဉ်/အပတ်စဉ် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ဟောပြောပွဲတွေ စုစည်းမှုဖြစ်မှာလား။ သင်ကိုယ်တိုင်ပြောသကဲ့သို့
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် ထုတ်ဝေဖြန့်ချိရေးအရင်းအမြစ်များသည် […] ကြိုတင်အတည်ပြုထားသော အကြောင်းအရာများကြောင့် […]
အပျက်သဘောဆောင်သောမှတ်ချက်များကို ရိုးရှင်းစွာမဖျက်ဘဲ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာပြင်ဆင်ထားခြင်းမရှိပါက ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်လည်း သင်၏ဝဘ်ဗျူဟာဟောင်းကို စွဲမြဲနေလိမ့်မည်ထင်ပါသည်။ ရှာဖွေမှုအဆင့်မြှင့်တင်ရန် ဗျူဟာတစ်ခုအနေဖြင့် ရိုးရှင်းစွာ ဖော်ထုတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
မတ်လ 14, 2007 မှာ 2: 06 AM
ဒုတိယ အကြိမ် ဖတ်ရှုခြင်း တွင် ကျွန်ုပ်၏ နောက်ဆုံး မှတ်ချက်ကို အပျက်သဘော ဆောင်ပါသည်။ အဲဒါက ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ဘူး။ Douglas ရေးခဲ့တဲ့ ပို့စ်ကောင်းလေး။
ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် ဘလော့ဂ်ကို အခြားသော စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ကိရိယာတစ်ခုထက် ပိုမြင်သင့်သည်ဟု ကျွန်တော် ထောက်ပြခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် ဖောက်သည်ထံသို့ တိုက်ရိုက်ချန်နယ်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း a) ပွင့်လင်းမြင်သာစွာနှင့် b) နှစ်လမ်းသွားဆက်သွယ်ရေးကိရိယာအဖြစ် အသုံးပြုမှသာ။
မတ်လ 14, 2007 မှာ 6: 44 AM
အဆိုးမြင်တာမဟုတ်ဘူး မာတင်။ ငါမင်းကိုသဘောတူပါတယ်… Blog Committee ဟာ အကြောင်းအရာတိုင်းကို အတည်ပြုသင့်တယ်လို့ မထင်ပါဘူး – ဒါပေမယ့် ကော်မတီအနေနဲ့ ဘလော့ဂ်တွေမှာ အကြောင်းအရာတွေ ဆက်လက်ရှိနေစေဖို့၊ အကြံပြုချက်တွေနဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို ပံ့ပိုးပေးပြီး အရှိန်အဟုန်ကို ထိန်းသိမ်းထားဖို့ အချိန်ယူသင့်တယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်သဘောတူသည်- အကယ်၍ ဘလော့ဂ်ကော်မတီသည် အကြောင်းအရာများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖြစ်ပါက- ဘလော့ဂ်သည် ၎င်း၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် စာဖတ်သူအား နေ့ချင်းညချင်း ဆုံးရှုံးသွားမည်ဖြစ်သည်။ အဲဒါကို ကျွန်တော့်ရဲ့ ဟောပြောပွဲမှာ သေချာရှင်းပြပါ့မယ်။
ငါလည်းသဘောတူတယ်… မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ရေးဗျူဟာရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနဲ့ PR လှည့်ဖျားမှုကို ဆက်တိုက်ကြားယောင်နေတယ်ဆိုရင်၊ မင်းလည်း ဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။
မတ်လ 14, 2007 မှာ 8: 18 pm တွင်
Doug - အရမ်းကောင်းတဲ့ပို့စ်။ ကျွန်ုပ်သည် ယခုအချိန်တွင် ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်တစ်ခု ဖန်တီးရန် လုပ်ဆောင်နေပြီး ဤပို့စ်တွင် အသုံးပြုရန် အရင်းအမြစ်များစွာကို တွေ့ရှိထားသည်။ ကောင်းတဲ့အလုပ် - ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မတ်လ 14, 2007 မှာ 8: 25 pm တွင်
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Patrick။ ကျွန်တော့်မှာ download, အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ရပါတယ်။ ငါဒီညပဲတင်လိုက်တယ် (ပုံနှိပ်စက်ပြီးရင် Kinkos မနက်ဖြန်အတွက်)
ဇွန် 11, 2007 မှာ 11: 11 pm တွင်
ဟာ့ဒ်မိတ္တူ ဒါမှမဟုတ် အဲဒီလေ့လာမှုအတွက် ပုံနှိပ်ထုတ်နိုင်တဲ့ တစ်ခုခုရဖို့ သိချင်ခဲ့တယ်။ ဒါကို ဖောက်သည်တွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးဖို့ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။
ကျွန်ုပ်၏ပိုကြီးသောဖောက်သည်များထဲမှတစ်ယောက်သည် "clog" ကိုတည်ဆောက်နိုင်မည်ဟုထင်သည်
13:2007 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 10, 05 တွင်
ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်နမူနာအချို့သည် နည်းပညာမဟုတ်သောကုမ္ပဏီများမှဖြစ်လျှင် ကောင်းပါသည်။
ဒီဇင်ဘာ 14, 2007 မှာ 2: 54 AM
အရမ်းကောင်းတဲ့ တုံ့ပြန်ချက်ပဲ yiu! နောက်ထပ်ဥပမာအချို့ကို ဆွဲထုတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ခရီးသွားအေဂျင်စီတွင် တစ်တန်ရှိနေသည်ဟု ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
သြဂုတ် 6, 2015 မှာ 10: 57 AM
ဗျူဟာတစ်ခုအနေဖြင့် ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်ရေးခြင်းသည် rme အတွက် ကောင်းမွန်သောအကြံဥာဏ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
လုပ်ငန်းကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက် ဆိုရှယ်မီဒီယာကို အသုံးပြုမည့်အစား၊ အများသူငှာ သို့မဟုတ် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော သုံးစွဲသူများ၏ အာရုံစိုက်မှုရရှိစေမည့် ဆောင်းပါးများရေးသားခြင်းကဲ့သို့သော အရာများစွာပါဝင်သည့် ဘလော့ဂ်တစ်ခုကို စတင်တည်ဆောက်သင့်သည် စာဖတ်သူများ။
၎င်းသည် သင့်အား စျေးကွက်ထဲတွင် ကြာကြာနေစေပြီး သင့်လုပ်ငန်းကို မြှင့်တင်ရန် ကူညီပေးပါမည်။
Skytech - မလေးရှားမှ ဘလော့ဂါ